बुधवार, कार्तिक ५, २०७७ ०१:३४:२८ युनिकोड
शनिवार, असार २०, २०७७ बालाराम उपाध्याय
सांकेतिक तस्वीर : गूगल।
राज्यको नीति भित्र रहेर राजपाठमा अहम भुमिका निर्बाह गर्ने, अगुवाई गर्ने, नेतृत्व प्रदान गर्ने, बृहत्तर राष्ट्रिय र मानव हितमा समर्पण रहनु नै राजनीति हो। देशको सम्पुर्ण क्षेत्रलाई शासन र अगुवाई गर्ने कार्य राष्ट्रिय राजनीति हो।
लगनशीलता, ईमानदारिता, पारदर्शिता र जवाफदेहीता राजनीतिको गहना हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको यात्रा पूरा भए पछि बनेको आधुनिक नेपाल जसको बीरताको गाथा अझैसम्म पनि कायम छ। हाम्रो जस्तो एकता, विश्वभरी कुनै देशमा पाइन्न। नेपाली जनता आफैमा इमानदार छन्, परिश्रमी छन्, क्रान्तिकारी पनिछन्, अन्याय र अत्याचारको विरुद्धमा धावा बोल्छन्। यसको उदाहरण त नेपाल अंग्रज युद्ध, राणा विरुद्धको आन्दोलन, पञ्चायत विरुद्धको आन्दोलन, जनयुद्ध, जन आन्दोलन छदैछन्। जनताको आन्दोलन र क्रान्तिको उद्धेश्य एउटा हुन्छ। त्यसबाट प्राप्त उपलब्धिको उपयोग अर्कै तरिकाले गरिदै आयो। शासन जनताको लागि गरिएको देखिन्न। शासन कुर्सीको लागि गरिएको छ।
२००७ साल देखि २०१७ सालसम्म राजनीतिक दल र नेताहरु बिच जुन किसिमको वैमनस्यता, लुछाचुडी र सत्ताको लागि तनाव थियो त्यो बर्तमानमा देखिन थालेको छ। नेपालको राजनीतिको छेक छन्द पाउन कठिन छ, सिद्धान्त, वाद, दर्शन हातीका देखाउने दात मात्रै हुन्। आधुनिक राजनीतिक सिद्धान्तलाई – उदारबादी चिन्तक धारा र माक्र्सबादी चिन्तक धारा गरि २ भागमा विभाजन गरिएको छ। राजनीतिक सिद्धान्तको दृष्टीकोणलाई पूर्वीय र पश्चिमि गरि दुई राजनीतिक दृष्टीकोणमा विभाजित गरिएको छ। बेद, महाभारत, रामायणमा प्रतिपादित सिद्धान्त पूर्वीय दृष्टीकोण हो भने, प्लेटो, सुकरात, अरस्तुद्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त पश्चिमी राजनीतिक दृष्टीकोण हो। यसरी गहिरिएर अध्ययन गर्दा नेपालीको राजनीति कुन सिद्धान्तमा आधारित छ? बुझ्न र बुझाउन सजिलो छैन। राजनीति र समाज सेवा एक सिक्काको दुई पाटा हुन्।
"कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रयोग हुँदै आएको श्रमजीवी, सर्वहारा शब्दलाई नेपाली शब्दकोशबाट हटाउन लगाए हुन्छ। जसको व्यवहारिक रुपमै प्रयोग हुदैन, त्यस्ता शब्दको के काम? भ्रस्टाचारको जालो झाङ्गिदै गैरहेको छ। ईमानदारिताको खडेरी पर्दै गैरहेको छ,। पैँसा कमाउने भर्र्याङ् राजनीतिलाई बनाइदैछ। जनता निरास छन्, यूवा पुस्ताको राजनीति प्रति बितृस्णा छ।"
गरिबी, अभाव, पछौटेपन, अशिक्षा मानव जातिको शत्रु हुन्। यिनिहरुको विरुद्धको लडाई राजनीति हुनु पर्ने हुन्छ। यहाँ यस्तो छैन। क्रान्ति गर्ने, लड्ने–भिड्नेहरु कति मरे, कति बेपत्ता छन्, कति घाइते र अपांग छन्, कयौं घरबार बिहिन छन्, पार्टी र नेताको लागि सर्वश्व गुमाए, आज ती मान्छेहरुको बारेमा बोलिदिने कोहि छैन। संगैको सहयोद्धा र सहकर्मी चिन्दैन, उड्नेले गुड्नेलाई चिन्दैन, गुड्नेले हिड्नेलाई चिन्दैन। कम्युनिस्ट पार्टीमा प्रयोग हुँदै आएको श्रमजीवी, सर्वहारा शब्दलाई नेपाली शब्दकोशबाट हटाउन लगाए हुन्छ। जसको व्यवहारिक रुपमै प्रयोग हुदैन, त्यस्ता शब्दको के काम? भ्रस्टाचारको जालो झाङ्गिदै गैरहेको छ। ईमानदारिताको खडेरी पर्दै गैरहेको छ,। पैँसा कमाउने भर्र्याङ् राजनीतिलाई बनाइदैछ। जनता निरास छन्, यूवा पुस्ताको राजनीति प्रति बितृस्णा छ। पार्टीमा लाग्यो, पद प्राप्त ग¥यो, त्यही पदको दुरुपयोग गर्दै अकुत सम्पति आर्जन ग¥यो। (मरे त मीत का छोरा मरे)। एक पटक पदमा पुगे पछि आजिवन छोड्नै नचाहने पदको लागि जे सुकै गर्न तयार हुने, यस्तो प्रवृत्ति नेपाली राजनीतिको विशेषता बन्न पुगेको छ। जुन देशमा नेतालाई गाली गरिन्छ, त्यो देशको विकास हुदै , गाली दिने र ,गाली खाने उस्तै भए पछि कसको के लाग्छ र! जनताले आफ्नो नेता वा प्रतिनिधिलाई ताली र सम्मान दिन लायक हुनै पर्छ । कुनै पनि पेसा व्यवसायमा सफल न भए के रोज्ने? राजनीति, विभिन्न अपराध ग/\_यो जोगिन राजनीति। के राजनीति पैसा कमाउनलाई गरिन्छ त? आफ्ना अपराध लुकाउन नेता भए पुग्छ त? के नेता भए पछि कामै न गरि पैसा आउँछ त? जनता भ्रमित छन् । नेतृत्वले सुझ बुझका साथ आफ्नो पार्टी र देशलाई सहि दिसामा लैजानु पर्छ। कुनै पनी सरकारको चाहना जनताको चाहना हो महाभारत।
किसानले समयमा मल पाउदैन, कृषि औजार उपकरण पाउदैन, अत्यन्तै परिश्रम गरेर बस्तु उत्पादन गर्छ बजार पाउदैन। बजार पाँउछ, भाउ पाउदैन। बिरामीले अस्पताल पाउदैन, अस्पताल पाए डाक्टर पाउदैनन्, डाक्टर पार औषधि पाउदैनन्। औषधि पाए पैसा पाउदैनन्। सेवाग्राही कार्यालयमा जान्छन्, कर्मचारी पाउदैनन्, कर्मचारी पाउछन् सिष्टता र नम्रता पाउदैनन्, नैतिकता र ईमानदारिदा पाउदैनन्, आफ्नो पन र सहयोगी मन पाउदैनन्। प्रहरी कहाँ जान्छन् सुरक्षित महसुस गर्दैनन्, न्यायालय जान्छन् निस्पक्षेता र तठस्तता प्रति शंखा गर्छन्। राजनीति कर्मी कहाँ पुग्छन् निस्शर्त काम हुने सुनिश्चितता ठान्दैनन्। भन्नुस् देश कस्तो बन्दैछ, जनताले कति बेला सम्म धैर्यता गर्ने? सर्बसाधारण को पक्षमा काम गरि दिने को? कहाँ कहिले भेटिएलान?
नेपालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय गरि ३ तहका सरकारहरु छन्। जनता र सरकारको तालमेल छैन, पार्टी र सरकार बिच या जनता र पार्टी बिच कहिँ कतै समन्वय र सहकार्य देखिदैन। जनता भन्छन् हाम्रो अभिभावकको हो? हाम्रा पिरमर्का कसलाई सुनाउ? पहुँच र पावर वालाको बोलवाला छ, जताततै अनियमितता र भ्रस्टाचार भइरहेकै छ। (बडाले जो गर्यो काम हुन्छ त्यो सर्ब सम्मत) लेखनाथ पौडेल। किसानले समयमा मल पाउदैन, कृषि औजार उपकरण पाउदैन, अत्यन्तै परिश्रम गरेर बस्तु उत्पादन गर्छ बजार पाउदैन। बजार पाँउछ, भाउ पाउदैन। बिरामीले अस्पताल पाउदैन, अस्पताल पाए डाक्टर पाउदैनन्, डाक्टर पार औषधि पाउदैनन्। औषधि पाए पैसा पाउदैनन्। सेवाग्राही कार्यालयमा जान्छन्, कर्मचारी पाउदैनन्, कर्मचारी पाउछन् सिष्टता र नम्रता पाउदैनन्, नैतिकता र ईमानदारिदा पाउदैनन्, आफ्नो पन र सहयोगी मन पाउदैनन्। प्रहरी कहाँ जान्छन् सुरक्षित महसुस गर्दैनन्, न्यायालय जान्छन् निस्पक्षेता र तठस्तता प्रति शंखा गर्छन्। राजनीति कर्मी कहाँ पुग्छन् निस्शर्त काम हुने सुनिश्चितता ठान्दैनन्। भन्नुस् देश कस्तो बन्दैछ, जनताले कति बेला सम्म धैर्यता गर्ने? सर्बसाधारण को पक्षमा काम गरि दिने को? कहाँ कहिले भेटिएलान? बाजे, बाबुको राजनीतिक योगदान को व्याज स्वरुप छोरानातिले पद प्रतिष्ठा पाउनु पर्ने? बाचुन्जेल पदमा बसिरहने? यी र यस्ता प्रवृतिले नेपालको राजनीति, पार्टी र नेताहरु प्रति जनताहरु असन्तुष्ट छन्।
राजनीतिलाई रोजगारी हैन सेवाको रुपमा लिइनु पर्छ। आफ्नो जिवनको लामो समय राजनीतिमा खर्चेका नेताहरुले इतिहासमा अनेकन प्रकारको भोगाई सिकाइ आर्जन गर्नु भएको छ। यसलाई शिक्षाको रुपमा लिने, शिक्षालाई श्रमसंग, श्रमलाई सीपसंग, सिपलाई उत्पादनसंग, उत्पादनलाई, रोजगारीसंग जोडौँ। तब मात्रै राजनीतिले सार्थकता पाँउछ, जनताको हित र राष्ट्रको समृद्धि यसै भित्र छ। राजनीति रोजगारी हैन सेवा हो। यसलाई आत्मसात गरौं, जनताको पक्षमा काम गरौं। देशको बिकास गरौं, जनताको मन जितौ, ठूलो त्याग र बलिदानीबाट प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गरौं। व्यक्तिगत, समूहगत र दलगत स्वार्थ भन्दा राष्ट्रको स्वार्थलाई सर्बोपरी ठानेर टुट्फुट हैन एकताबद्ध भएर जाने प्रण गरौं।
लेखक उपाध्याय नेकपाका नेता हुनु हुन्छ।
प्रकाशित मिति: शनिवार, असार २०, २०७७, १०:५४:००